Abavelisi bomoya beBhegi yomoya China Umatshini wokuhambisa umoya weBlack mveliso kunye nababoneleli
Komoya Bulk Ingxowa HV-34
Iingxowa zeetapile zomoya zivelisa imeko efanelekileyo yazo zonke iintlobo zeemveliso ezifuna ukuhamba komoya kwilaphu ukuya engxoweni. Ukugcina ngokukhuselekileyo kunye nokuhamba, ezi ngxowa zinokuthintela iimveliso ukuba zonakaliswe ngokufuma kunye nokubumba. Kwelinye icala, ezi ngxowa zilungele ukuphatha, ukugcinwa kunye nokuthuthwa.
Komoya Bulk Ingxowa HV62
Iingxowa ezikhululekileyo zomoya zenziwe nge-PP eyintombi, ezinye zazo zidityaniswe nomnatha. Ziyathandwa zisetyenziselwa ezolimo ukugcina okanye ukuguqula imifuno njengoko zinokukhuthaza ukuhamba komoya kunye nokuphefumla kwemveliso.
Ngokwesiqhelo sinamawaka aliqela ezi Ngxowa Zomoya zininzi ezikhoyo. Ingxowa yeSpeed ​​Bulk ivumela ukuhamba komoya kungene kwimveliso eqhutywa engxoweni.